Global Voices teny Malagasy » Thailandy: Fiampanga sivy hanenjehana ny Prachatai, webmaster · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Febroary 2019 4:21 GMT 1	 · Mpanoratra CJ Hinke Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Thailandy, Mediam-bahoaka, Solovava, GV Mpisolovava
FACT :  fiampangana namboamboarina hanenjehana ny Prachatai sy ny fahalalahana antserasera
Nosamborina  tamin'ny 6 Marsa araka ny Lalàna mifehy ny Heloka An-tsolosaina ao Thailandy  i Chiranuch Premchaiporn, webmaster ao amin'ny vavahadim-baovao antserasera tsy miankina, Prachatai  ao Thailandy.
Noho ireo fanehoan-kevitra avoakan'ny mpamaky  ao amin'ny adihevitra antserasera ao amin'ny Prachatai voalaza fa manivaiva ny mpanjaka (lèse majesté) no anton'ny fiampangana azy.
Tamin'ny 7 aprily, nantsoina ho any amin'ny foiben'ny polisy Royal Thailandey i Chiranuch mba hanaovana fanadihadiana bebe kokoa. Niaraka tamin'ny talen'ny Prachatai, Chuwat Rerksirisuk sy ny mpisolovavany roa izy. Nilaza fiampangana enina vaovao hanenjehana an'i Chiranuch ny polisy Thailandey noho ny vaovao nomeny manokana ho azy ireo taorian'ny fisamborana azy.
Milaza ny polisy fa navela hijanona tao amin'ny firesadresahana Prachatai nandritra ny 15 andro ireo lahatsoratra voalaza ireo. Mihevitra ny polisy fa fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny solosaina ny lahatsoratra tsirairay na dia efa nesorina avy hatrany taorian'ny fanamarihan'ny minisitry ny Teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana ao Thailandy aza ny lahatsoratra.
Tsy nisy nosamborina ny tao amin'ny biraon'ny tranonkala. Mihevitra ny FACT fa noho ny antony fanampiny roa no niampangana an'i Chiranuch. Voalohany, niandry ela be ny polisy vao nesorina tao amin'ny Prachatai ny lahatsoratra orizinaly tao amin'ny dinika. Noho izany dia tsy afaka nahita izay tena namoaka marina ny lahatsoratra tamin'ny adiresy IP ry zareo. Faharoa, nahazo fahombiazana tokoa ry zareo tamin'ny fanasaziana 20 taona an-tranomaizina an'ilay bilaogera Suwicha Thakhor tamin'ny 3 Aprily.
Midika ireo fiampangana fanampiny araka lalàna mifehy ny heloka antserasera fa miatrika 50 taona am-ponja i Chiranuch noho ny fanehoan-kevitra tsy nataony.
Nilaza tamin'i Chiranuch ihany koa ny polisy fa olona enina fanampiny no ho voampanga araka ny lalàna mifehy ny solosaina amin'ity volana ity.
Miditra amin'ny tetikady ara-politika ny governemanta Thailandey mba hanampenam-bava ireo vaovao tsy miankina sy ny fahalalaham-pitenenana. Mihevitra ny governemanta fa afaka mampangina ireo mpikatroky ny fahalalahana izy ireo.
Raha tsy arovantsika amin'ny alalan'ny teny sy ny hetsika ataontsika i Chiranuch, dia hiatrika fanagadrana noho ny fahalalaham-pitenenana isika rehetra. Inona no mampiavaka an'i Thailandy amin'i Burma amin'izany?
Mangataka ny FACT  mba hesorina ny fiampangana rehetra an'i Chiranuch Premchaiporn. Media malalaka, Thailandy Malalaka!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/18/134968/
 Lalàna mifehy ny Heloka An-tsolosaina ao Thailandy: https://advocacy.globalvoicesonline.org/wp-content/downloads/Act_on_Computer_Crime_2550(2007).pdf
 ireo fanehoan-kevitra avoakan'ny mpamaky: http://www.prachatai.com/english/news.php?id=1035